Broney: Famatsiana ny tra-boinan’ny tondra-drano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2009 12:38 GMT
Ny oram-baratra tamin’ny volana lasa teo dia nahatonga tondra-drano sy fihotsahan-tany tao amin’ny firenena, izay nandrava trano maro misy fianakaviana miisa hatrany amin’ny 200 no mihoatra, nahaverezana tany sy voly antapitrisany tao amin’ny faritra efatry ny firenena. Izany zava-nitranga izany no nahatonga ny mpiara-monina hiara-mientana hangataka fanampiana ho an’ireo tena tsy manan-katokona sy ireo ravan’ny herisetran’ny natiora.
Napetraky ny ministeran’ny fanajarina ny tany tamin’ny 3 Febroary 2009 ny teti-bolam-bahoaka hamatsiana ny fanampiana ireo tra-boina tamin’ny tondra-drano farany teo. Ny tanjona dia ny hanamora ny fahasahiranana mianjady amin’ireto tra-boina sy hiverenan’izy ireo amin’ny fiainany mahazatra. Satria singa iray ny ezaka fanangonana ireo fanomezana ho amin’ity famatsiana ity, dia narafitra mandritra ny herinandro vitsivitsy ny hetsika malala-tanana mba ho loharanom-bola nasionaly izay entina hamatsiana ireo tra-boina tamin’ny tondra-drano sy ny fihotsahan-tany. Ity no ohatra iray izay mampiseho fa mifanohana ny mpiara-monina ao an-toerana amin’ny alalan’ny fifanampian’izy samy izy ihany. Fiteny Malay ny hoe Masyarakat Perihatin izay midika hoe fiaraha-monina mifampitsinjo.
Ohatra, niezaka mafy ny trano fandraisam-bahiny antsoina hoe Orchid Garden Hotel hitondra ny anjara birikiny amin’ny alalan’ny mofomamy. Nahalafo mofomamy mihoatra ny 2 000 isa ity hotely ity. Tretrika tokoa izy nandranty fonosana mofomamy miisa 25 milanja ho 250kg. Ny hadirin’ireo fonosana rehefa atambatra dia mahatratra ho 84 x 84 santimetatra tora-droa ny velarany ambanty ary 192 santimetra ny haavony (7 pieds X 7 pieds X 16 pieds ).
Sarin’ny Strictly Beautiful
Mitatitra mahakasika izay fanomezana mofomamy izay i Ranoadidas ary koa mahakasika loharanom-bola hafa izay nahalafosana tapakila ahazoana mihinana Nasi Lemak miisa 900, ilay sakafo malaza ao an-toerana:
Nahavita nandafo mofomamy 2000 isa ny fanomezan-tanana mofomamy tao amin’ny Orchid Garden Hotel. Isa lehibe tokoa izany. Nisy ihany koa ny hetsika malala-tanana tao amin’ny D’, toeram-pisotroana kafe sy trano fisakafoanana madinika , koa tao amin’izany no nandafosana tapakila Nasi Lemak miisa 900 (sakafo ao an-toerana vita amin’ny vary andrahoina miaraka amin’ny ronono azo avy amin’ny voanio) sy atody omeleta..
Nitatitra i AnakBrunei momba ny hetsika malala-tanana baolina kitra izay nahazoana vola mitentina B$ 100 000 avy amin’ny mpijery.
Lalao baolina nisy teo amin’ny DPMM FC sy FFBD XI. Nokarakarain’ny Federasionan’ny Baolina Kitran’ny Brunei ao Darussalam ny lalao. Hatao fanomezana ho amin’ny famatsiana ny tra-boina tamin’ny tondra-drano sy ny fihotsahan’ny tany ny vola rehetra azo tamin’io lalao io (manakaiky ny B$100 ny teti-bola araka ny vaovao azoko).
Ny sary etsy ambony dia mampiseho ny Voninahitra Avo ananany dia ny Satro-boninahitry ny Printsy, Filohan’ny DPMM Football club manome ireo vola voaangona avy tamin’ny hetsika malala-tanana baolina kitra ho eo am-pelatanan’ny filoha mpiandraikitra ny tondra-drano sy ny fihotsahan-tany.